व्यङ्ग्य-विनोद - विचरा कवि | मझेरी डट कम
व्यङ्ग्य-विनोद - विचरा कवि
kbs — Sun, 08/29/2010 - 09:28
सुशील रिजाल 'अभिनव'
युवामञ्च २०६७ साउन
मेरो बोधो दिमागमा जति पढे पनि घुसेन । जति धोके पनि कहिल्यै पसेन । त्यसैले मलाई डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने बा-आमाको सपना मुखभित्र हालेको चीजबलझै बिलायो । एकदिन बा'ले भन्नुभाथ्यो- "पढिनस्, तैंले छोरा ! अब, राजनीतितिर जान्छन् । देश र लोकतन्त्रलाई खै कतातिर धकेल्छस् ।" रातभरमा ढुसी पलाएझैं मेरो मनमा एउटा आइडिया पलायो, कम्तीमा बा'को सादर बचनको आदर गर्छु । आजैबाट राजनीतिमा छिर्छु तर फेरि यसो सोचें- राजनीतिमा लागेर के पो गर्नु ? न झूठ बोल्न आउँछ, न ठग्न नै आउँछ । यस्तो निमुखाले राजनीतिमा लागेर के पो पाउँछ ? फेरि त्यही बेला, एकदिन कलेज जाँदा बाटोमा ट्रकको पछाडि लेखिएको कुरा याद आयो- नेपाली नेताको जीवनको लेखा जोखा, झुठ-बेइमानी, भ्रष्टाचार अनि धोका ।
अनि तिनै हरफहरूद्वारा हामीले हाम्रो साथीलाई जसको बुबा जिल्ला स्तरीय नेता थिए । जिस्काएको पनि सम्झना आयो । यसरी राजनीतिमा छिर्ने योजना पलभरमै ढल्यो मानौँ मेरो योजना नेपाली मन्त्रिपरिषद् हो । पढ्दा पनि पढिएन, राजनीतिमा पनि गइएन । कविता फुर्‍यो दिमागमा कवि भइयो बेफ्वांकमा । अरू कविका कविता सुन्दा त मान्छेका कान ठाडा-ठाडा भएर उठ्थे म विचरा कविको कविता सुन्दा मान्छे नै ठाउँबाट उठ्छन् भन्या । त्यै पनि मलाई मेरो सिर्जना र कवित्वप्रति गर्व थियो । जे-जे आउँथ्यो दिमागमा, म लेख्दै जान्थे हतारमा । कतै त्यो पङ्क्ति बिर्सने पो हो कि भन्दै, कविज्यूको उपाधि खुस्कने पो हो कि सोच्दै भर्खर जब म कवि भा'थे, हरेक साना, ठूला काव्य गोष्ठीमा गा'थे । अरूको मद्दतले भए पनि हरेक समारोहको निम्ता पा'थे । झन् आफ्नै कविता सङ्ग्रह छपाउन सयौंपटक प्रेस पनि धा'थे । जतिपटक प्रेसमा गए, नव प्रवेशीको पुस्तक छाप्न गाह्रो हुन्छ भन्दै अस्वीकृत गरिदिन्थे । लौं भएन अब त हदै भो भनेर एकपटक एउटा प्रकाशकको खल्तीमा मोटो रकम छिराएँ, अनि आफ्नो कविता सङ्ग्रह छापिने लगन जुराएँ ।
यसरी एउटा प्रेसले मेरो पुस्तक छाप्न स्वीकार गर्‍यो । आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै गरें र पुस्तक बजारमा आउने दिनको प्रतीक्षा गरिरहे । यता म पुस्तक कहिले बजारमा आउला भनी व्यग्र थिएँ, उता प्रेसका अधिकारी नव प्रवेशीको किताब छाप्नु पर्‍यो भनेर उग्र थिए । पैसा पेलेको अनुसार किताब निक्लन ढिलो भयो, त्यसैले छपाइको हालखबर सोध्न छाप्ने प्रेसमै गएँ । त्यहाँ एक सज्जन भेटिए र उनले भने-कविज्यू, तपाईंको छापिँदै गरेको पुस्तकका दुईचार वटा कविता मैले पढे । तपाईं त ठ्याक्कै बादशाह अकबरले जस्तै लेख्नु हुँदो रहेछ नि । सुरुमा त सुनेर दङ्ग परें तर पछि आश्चर्य मिश्रति भावमा मैले सोधे होइन बादशाह अकबरलाई त लेख्नै आउँदैनथ्यो हैन र भन्या ? त्यही भएर त मैले तपाईंलाई त्यस्तो भन्या"- उनले मुस्कुराउँदै पो जवाफ फर्काए ।
त्यसो भए घोचपेचको शृङ्खला पनि सुरु भएछ भन्ठानेर मनमनै चित्त बुझाए तर यस्ता साना तिना दुई-चार बचनवाणले आत्तिनेवाला थिइन् । किताब बजारमा आउनु अगावै सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग कुरो मिलाइसकेको थिएँ । मलाई जति जिस्क्याए पनि कुनै लज्जा थिएन किनकी मेरो नजर ठूलै पुरस्कारमा थियो । त्यसैले दुःख गरेर पुस्तक छपाएँ, निकै खर्च गरेर विमोचन पनि गराएँ । पुस्तक बजारमा पनि ल्याइयो, मुस्किलले दुईचार जना पाठक पनि पाइयो तर हेर यो कविको फुटेको कर्म, आफ्नै श्रीमतीले कविता पढ्न इच्छा जाहेर गरिनन् । लौं वित्यास् पर्‍यो । एउटा कविले आफ्नै श्रीमतीलाई पनि आफ्नो कविता पढ्न सुनाउन फकाउनु पर्ने जमाना आइसकेछ ।
श्रीमतीलाई भने- हेर प्रिय, तिमीलाई के थाह, म आफ्नो कविताद्वारा सारा संसारमा आगो लगाउन सक्छु । "हिम्मत भए पहिले घरको चूल्होमा आगो लगाएर देखाउनुस् । श्रीमतीले जवाफ दिइन् । बल्ल थाह पाए- पूरा सम्पति जति त पुरस्कारले सजिएको सपना देख्दै गर्दा, पुस्तक छपाउन, बिमोचन गराउन र बजार व्यस्थापन गर्न मै स्वाहा पारिसकेछु ।
रहरले कवि भए, रहरले नै पुस्तक छपाएँ तर आज आफ्नै अवस्था घरको न घाटको पो बनाए । कुनै सम्मान र पुरस्कार त परै जाओस्, धेरै पाठकको दराजमा मेरो सानो पुस्तक अटेन तैपनि म एक कवि हुँ भन्ने दम्भ कहिल्यै घटेन । एक दुई सयप्रति मुस्किलले बिक्यो त्यसैले प्रकाशकले मलाई रोयल्टी दिन सकेन । म चर्चित नभए पनि सञ्चारमाध्यममा मित्रहरू थिए त्यसैले इन्टरभ्युमा बोलाउन छाडेनन् ।
यस्तै एउटा काव्य गोष्ठीमा जाँदै गर्दा एक व्यक्तिले मेरो नजिक आएर सोध्यो- कविज्यू के हजुरसँग पाँचसय रूपियाँको साट्ने खुद्रा पैसा छ ? मैले ङिच्च दाँत देखाएर छैन त भने तर उनले त्यो मार्मिक प्रश्न म (एक कवि)लाई सोधेर मेरो जुन इज्जत बढाइदिए । त्यसप्रति भने धेरै आभारी छु ।
सानो आग्रह गरे है सर
कत्रो दुर दर्शिता
सुनमा सुगन्ध हुने थियो कि
तिमी शितल दिने छायाँ
प्रेमिलहरूको प्रेम दिवस
यसै गरी मिलोस तिम्रो माया
देशभक्त हुँ म
नेपाली भाषाको शब्द-ढुकुटी
नेपाल मेरो घर
सहकारी नारा (कविता)
शुभ दिन बिहानीको
कसरी जाऊँ ?
मोतिको प्याला र जुठो मदिरा
यो सम्झने मन छ म बिर्सुं कसरी
भेदभाव र छुवाछूत सबै मिली हटाऊँ
उमेर कमै भया पन,
गुण्डासँग किन साँठगाँठ गर्छौ नेता
ती आँखाहरूभित्रको उज्यालो
सत्ता भन्ने चिजै कस्तो
मुटु ढुक्क ढुक्क गर्यो
कथाले मागे पछि -२
सडकमा तीन दशक
कथा जस्तो होईन जीवन
चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो भए झैं लाग्दछ
सोह्र कथाका सोह्रै आवाज
जिन्दगी का कोशी हरु तर्न पनि सकिएन
कस्तो हुन्छ चोखो मायाँ
मधुपान गरुँ लागे मधुवनै जाउँला
कतिपल्ट टाल्नु खै?
हैंसा बूढीको मुख